करेन्ट लागेर दम्पती सहित तीन जनाको ज्यान गयो
काठमाडौं । धनुषाको एक होटलमा रहेको फ्रिजमा करेन्ट लाग्दा दम्पती सहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका-७, पोर्ताहास्थित पूर्वेली स्टाफलाइन होटेलक...
ग्रेटाले थनबर्गको विश्व हल्लाउने भाषण युट्युबमा
एजेन्सी । ग्रेटा थनबर्ग क्लाइमेट चेन्जको अन्तर्राष्ट्रिय अनुहार हुन् । स्विडेनको संसद बाहिर विरोध–प्रदर्शनका लागि उनले हरेक शुक्रबार आफ्नो स्कूल छोडिन् । ग्रेटाजस्तै संसारका हरेक स्कूले बच्चा र युवा ...
दसैंको टिका : विदेशमा रहने नेपालीहरूको लागि टिकाको साइत
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पश्चिमा मुलुकहरुको दसैंको टीका एक दिनअघि नै र समय पनि देशअनुसार फरक पर्ने जनाएको छ । समितिको असोज ५ गते बसेको बैठकपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा सो कुरा...
एजेन्सी । पाकिस्तान प्रशासित अजाद कश्मीरको मिरपुर क्षेत्रमा हिजो(मंगलबार) बेलुका गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २५ पुगेको छ । हिजो बेलुका ५.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा अन्य ४ सय...
कृषि विकास बैंकको करिब ५३ लाख रुपैयाँ लुटियो, १० जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले कृषि विकास बैंकको रकम ह्याक गरेर लुट्ने १० जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुले कृषि विकास बैंकको केन्द्रीय शाखाबाट करिब ५३ लाख रुपैयाँ ह्याक गरेर लुटेको प्रहरीले जनाएको छ । कृषि विका...
अमेरिकी संसदमा ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोगको प्रक्रिया शुरु
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाउने औपचा...
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका १४ बल्खुबाट प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँ १ लाख ५० हजार सहित २ जनालाई सोमबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा भक्तपुर बस्ने भारत बेतिया घर भएका ३० वर्षीय...
नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच छ बुँदे सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्यसनिष्ट पार्टीबीच छ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच भाइचारा स्थापना गर्ने उद्धेश्यले पहिलो पटक सम्झौता पत्रमा ह...
एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘क्लाइमेट एक्सन समिट’मा पर्यावरण कार्यकर्ता १६ वर्षकी ग्रेटा थनबर्गले संसार हल्लाउने भाषण दिएकी छिन् । ‘‘हाम्रो अस्तित्व नै लोप हुने अवस्था आरम्भ भएको छ र तपाईँहरू भने प...
राष्ट्रकवि एक सय एक वर्षमा
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले १ सय १ वर्षको शतायु पार गरेका छन् । वि.सं. १९७६ असोज ७ गते लमजुङ जिल्लाको पुस्तन गाउँमा जन्मिएका घिमिरे आजबाट १०१ वर्षमा प्रवेश गरेका हुन् । घिमिरे स्वच्छन्दतावादी भावध...
राष्ट्र बैंकले जलायो झण्डै ५ खर्ब बराबरका नोट
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठूलो परिणाममा नोट जलाएको छ । राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ९४ अर्ब ७६ करोड ६९ लाख ९४ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ पुराना तथा झुत्रा नोट जलाएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्ममा यो नोट ...
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चीन र नेपालका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच भाइचारा सम्बन्धका लागि आज समझदार...
पपुआमा १६ जनाको मृत्यु, ६५ जना घाइते
एजेन्सी । इण्डोनेसियाको पूर्वी क्षेत्र पपुआमा भएको पछिल्लो घटनामा १६ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ६५ जना घाइते भएका छन् । सोमबार सयौं प्रदर्शनकारी जसमा हाइ स्कुलका विद्यार्थी पनि थिए, उनीहरुले सरकारी कार...
ग्यासको मूल्य घट्यो, घटेको मूल्यमा ग्यास नबेचे निगमले कारबाही गर्ने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले घटेको मूल्यमा ग्यास बिक्री नगर्ने एलपी ग्यास उद्योगी तथा वितरण केन्द्रलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । निगमले मूल्य घटाए पनि त्यही अनुसार बिक्रीवितरण नभएको पाएपछि नि...
कालीमाटीमा ४ जनालाई घाइते बनाएको राँगोलाई गोली हानेर मारियो !
काठमाडौं । काठमाडौंको कालीमाटीमा राँगोले हान्दा चारजना घाइते भएका छन् । काठमाडौंमा मासुका लागि तराइबाट ल्याइएको राँगो मंगलबार बिहानै कालीमाटीमा ट्रकबाट झार्ने क्रममा सडकमा निस्किएर चारजनालाई हानेर घाइ...